15. Āhāra Paccaya | Dhamma Training Center
Aug 28 th, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၅ – အာဟာရပစ္စယော Ahara Paccayo (Nutriment condition)PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၅ – အာဟာရပစ္စယော Ahara Paccayo (Nutriment condition)...
15- Ahara Paccaya PDF file...
Apr 11 th, 2020
၁၅ – အာဟာရပစ္စယော Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (1 of 7)
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၁၅ – အာဟာရပစ္စယော Āhāra Paccayo (Nutriment condition) 15. Āhāra paccayo –...
၁၅ – အာဟာရပစ္စယော Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (2 of 7)
Āhārapaccayo Pańhāvāro Kusalo dhammo kusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo. Kusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. (1) Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo. Kusalā āhārā...
၁၅–အာဟာရပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ zawgyi ၄၂၉။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလာ အာဟာရာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁) ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန...
၁၅ – အာဟာရပစ္စယော Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (4 of 7)
၁၅-အာဟာရပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ zawgyi ၄၂၉။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု–၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အာဟာရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ကုသလာ အာဟာရာ သမ္ပယုတ္တကာနံ...
၁၅ – အာဟာရပစ္စယော Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (5 of 7)
ဘ၀နှင့်ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ zawgyi သဗ္ဗေ သတ္တာ အာဟာရဋ္ဌိတိကာ ကံက ဘ၀အသစ်ကို ပို့ပေးလိုက်သဖြင့် ဘ၀အသစ်ရရှိရေး၌ ကံ၏တာဝန် ကျေပြွန်လေပြီ။ ဤရရှိထား သည့်ခန္ဓာ ဆက်လက် ရှင်သန်နေရန်မှာ အာဟာရက တာဝန်ယူကာ ထောက်ပံ့ပေးရ၏။ ‘သဗ္ဗေ သတ္တာ အာဟာရဋ္ဌိတိကာ’...
၁၅ – အာဟာရပစ္စယော Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (6 of 7)
ဆာလောင်ခြင်းသည် ရောဂါမည်၏ zawgyi ဇိဃစ္ဆာ ပရမာ ရောဂါ၊ သင်္ခါရ ပရမာ ဒုက္ခာ။ ဧတံ ဉတွာ ယထာဘူတံ၊ နိဗ္ဗာနံ ပရမံ သုခံ။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းသည် အလွန်ကဲဆုံး အနာရောဂါမည်၏။ ခန္ဓာငါးပါး သင်္ခါရတရားတို့သည် အလွန် ကဲဆုံး...
ဘေးဒုက္ခအပေါင်း၏ အကြောင်းရင်း ဖဿ zawgyi သတ္တ၀ါတို့သည် ချမ်းသာခံစားမှုကို အလွန် စုံမက်ကြ၏။ ချမ်းသာခံစားရေးအတွက် ချမ်းသာမှုပေး နိုင်မည့် အာရုံကို တွေ့ထိရန် အမြဲ ကြိုးပမ်းနေကြ၏။ လှပသော အဆင်းကို မြင်ရလျှင် ချမ်းသာမှု ဖြစ်ပေါ်၏။ ထို့ကြောင့်...
Dec 19 th, 2019
၁၅- အာဟာရပစ္စယော PDF – Āhāra Paccayo (Nutriment condition)
၁၅- အာဟာရပစ္စယော PDF file ( Āhāra Paccayo – Nutriment condition)...
Dec 12 th, 2019
၁၅- အာဟာရပစ္စယော – Āhāra Paccaya (Nutriment condition) Number fifteen is Āhāra Paccaya, nutriment condition. Āhāra is compared to supporting poles. There are...
၁၅- အာဟာရပစ္စယော – Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (2/5) zawgyi ၄၂၉။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အာဟာရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ကုသလာ...
၁၅- အာဟာရပစ္စယော – Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (3/5) zawgyi သဗ္ဗေသတ္တာ အာဟာရ ဋ္ဌိတိကာ ( က-၁ ) ‘သဗ္ဗေသတ္တာ အာဟာရ ဋ္ဌိတိကာ’ သတ္တ၀ါမှန်သမျှသည် အာဟာရအကြောင်း အထောက် အပံ့ကြောင့်သာ ဖြစ်တည်...
၁၅- အာဟာရပစ္စယော – Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (4/5)
၁၅- အာဟာရပစ္စယော – Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (4/5) zawgyi ဆာလောင်ခြင်းသည် ရောဂါမည်၏ (ဃ-၁) ဇိဃစ္ဆာ ပရမာ ရောဂါ၊ သင်္ခါရ ပရမာ ဒုက္ခာ။ ဧတံ ဉတွာ ယထာဘူတံ၊ နိဗ္ဗာနံ...
၁၅- အာဟာရပစ္စယော – Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (5/5)
၁၅- အာဟာရပစ္စယော – Āhāra Paccayo (Nutriment condition) (5/5) zawgyi ကဗဠီကာရ အာဟာရ (ဆ-၁) ဤဘ၀ကို ပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ် မှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဘ၀တာ အသက်ရှင်ရေးကို ရုပ်အာဟာရတစ်ပါးက ထောက်ပံ့သည်။ (ဆ-၂) နာမ်အာဟာရသုံးပါးကမူ တစ်ဘ၀ပြီး၊ တစ်ဘ၀ သံသရာခရီးရှည်မဆုံးမချင်း...
Oct5th, 2019
ရုပ်အာဟာရနှစ်မျိုး (ဈ-၁) ရုပ်အာဟာရနှစ်မျိုးရှိ၏ ၎င်းင်းတို့မှာ ၁-ထမင်း ဟင်း သစ်သီးစသည် ဗဟိဒ္ဓသန္တာန်၌တည်သော သြဇာနှင့် (ဈ-၂) အဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ရှိသော (ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ) ဟူသော စတုသမုဋ္ဌာနိကသြဇာတို့ ဖြစ်၏။ စတုသမုဋ္ဌာနိကသြဇာ (ဈ-၃) ကံကြောင့်ဖြစ်သည့်...
ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။(ကု၊ ကု၊ ဗျာ-၃) Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa...
အရိယာဖြစ်သည်တိုင် ကျေးဇူးပြုခဲ့သည့် ထမင်းအာဟာရ
အရိယာဖြစ်သည်တိုင် ကျေးဇူးပြုခဲ့သည့် ထမင်းအာဟာရ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် သံဃာငါးရာခြံရံလျက် အာဠ၀ီမြို့၌ ဆွမ်းခံ ကြွတော်မူစဉ် သူဆင်းရဲသားတစ်ယောက် သည် နွားပျောက်သဖြင့် ရှာနေ၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဤသူဆင်းရဲအရိယာဖြစ်မည့်အရေးကို မြင်တော်မူသဖြင့် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်မှသည် ယူဇနာသုံးဆယ် (မိုင်-၃၀၀ ခန့်) ကွာဝေးသည့် အာဠ၀ီမြို့သို့ ကြွလာတော်မူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။...
အာဟာရပစ္စယော – ( āhāra paccaya )
၄၂၉။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) Kusalo dhammo kusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo. ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အာဟာရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ...